Ku maamul furayaasha isticmaalaha passwd | Laga soo bilaabo Linux
Gerak | | GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Xisaabaad badan oo isticmaale ayaa ku jiri kara nidaamka qalliinka, mid walbana leh lambarkiisa sirta ah. Iyaga wax ka beddel Linux, ma laha dhibaato weyn. Haddii aad u baahatay, halkan waxaa ku yaal amar lagu maareeyo furayaasha isticmaale ee qalabka: passwd.
Amarka passwd waxaa loo isticmaalaa beddel lambarka sirta ah ee koontada isticmaalaha. Waa amar fara badan oo qaab gaar ah loo qaadi karo. Isticmaalaha joogtada ah, waxaan beddeli karaa oo keliya lambarka sirta ah ee koontadiisa, halka isticmaale leh rukhsad superuser ah ayaa beddeli kara lambarka sirta ah ee koonto kasta oo nidaamka ku jirta. iyo sidoo kale qeexida xakamaynta dhicitaanka furaha kasta iyo inta jeer ee la badalayo. Tusaale ahaan, intee in le'eg ayey ku qaadataa furaha inuu dhacayo oo lambar sir ah waa in la qeexaa.
Si aad u bedesho erayga sirta ah ee isticmaaleha hadda, marka hore furo terminal oo orod:
marka hore qor lambarka sirta ah ee koontada.
(hadda) sirta UNIX:
Markaad geleyso (iyo haddii ay sax tahay dabcan tan) waa inaad hadda gelisaa erayga sirta ah ee koontada, iyo mar kale xaqiijin ahaan.
Gali furaha cusub ee UNIX: Ku qor lambarka cusub ee UNIX ::
Haddii ereyada sirta ahi is waafaqaan, markaa hambalyo, hadda waad bedeshay erayga sirta ah.
Beddelida ereyada sirta ah ee isticmaaleyaasha kale
Haddii aad leedahay mudnaanta superuser, markaa waad beddeli kartaa lambarka sirta ee isticmaaleyaasha kale ee nidaamka. Waxaan ku dari doonaa horgalaha "sudo", si aan u galno boosteejada sidii isticmaale super. Guud ahaan, Passwd, wuxuu hayaa habeyn la mid ah tan
meesha ikhtiyaarrada la heli karaa yihiin:
Haddii aan u malayno in nidaamku leeyahay adeegsadayaasha User1, User2 iyo User3, oo aan jeclaan lahayn in la beddelo lambarka sirta ah ee User2. Waxaan ku fulinnaa qadka taliska:
ka dib markii aad gasho erayga sirta ah ee cusub, ee hoos imanaya nidaam la mid ah kii hore, lambarka sirta ah ee User2 waa laga beddeli doonaa isticmaalehaaga, iyada oo loo marayo rukhsadaha superuser.
Waxaa jira shaqooyin kala duwan oo passwd uu leeyahay, beddelo / qufulka / furitaanka / dhimo furayaasha. Xaalad gaar ah, waxaan uga tagayaa sida loo fasiro qoraalka marka aan hubinayo xaaladda furayaasha isticmaale kasta. Haddii aan fulino qadka:
passwd -S Isticmaal1
Sooceliyaa khad la mid ah kuwa soo socda
Isticmaalaha1 S dd / mm / yyyy f1 f2 f3 f4
User1 : magaca koontada
S: Xaaladda muhiimka ah. L qufulan P firfircoon iyo NP oo aan furaha lahayn
dd / mm / yyyy: taariikhda beddelka ugu dambeeya ee furaha
f1: Muddada ugu yar ee maalmaha kadib dib u habeynta kadib
f2: Muddada ugu badan ee maalmaha illaa isbeddelka soo socda.
f3: Muddada maalmaha digniinta beddelka sirta ah
f4: Muddada la oggol yahay ee maalmaha aan firfircooneyn (-1 = aan xad lahayn)
Passwd-ka waxaad haysataa hab fudud oo aad furayaasha nidaamkaaga uga maamuli karto qunsulka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku maamul furayaasha isticmaalaha passwd